अन्तिम ओभर जडेजालाई बलिंग गर्न किन दिईयो ? धोनीले बताए कारण – WicketNepal
अन्तिम ओभर जडेजालाई बलिंग गर्न किन दिईयो ? धोनीले बताए कारण
WicketNepal Staff, २०७७ कार्तिक २, आईतवार ००:४९
१३ औं आईपीएल अन्तर्गत शनिवार सम्पन्न दोश्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नाई सुपर किंग्सको मुखबाट जित खोज्दै लिग अंकतालिकामा पुनः शिर्षस्थानमा उक्लियो। रोमान्चक खेलको अन्तिम ओभरमा जितको लागि १७ रन आवस्यक रहंदा दिल्ली ब्याट्सम्यान अक्षर पटेलले रभिन्द्र जडेजाको दोश्रो, तेश्रो र पाँचौ बलमा छक्का हिर्काउदै दिल्लीको जित सुनिस्चित गरेका थिए।
चेन्नाई कप्तान धोनीले अन्तिम ओभरमा २ जना देब्रे हाते ब्याट्सम्यान धवन र पटेल क्रिजमा हुँदा देब्रे हाते स्पिनर रभिन्द्र जडेजालाई बलिंग दिएको निर्णय धेरैले आश्चर्यजनक माने। इनिंगमा जडेजालाई अन्तिम ओभर बलिंग गर्नु अघि सातौँ ओभरमा मात्र बलिंग गराइएको थियो। उक्त ओभरमा धवनले २ चौका प्रहार गरेका थिए भने तेश्रो बलमा दिपक चाहरले क्याच छुटाउन पुग्दा जडेजा विकेट लिन चुकेका थिए। त्यसपछि देब्रे हाते ब्याट्सम्यान धवन लगातार क्रिजमा जम्दा धोनीले जडेजालाई बलिंगमा ल्याएका थिएनन्। तर अन्तिम ओभरमा डेथ ओभर स्पेसलिस्ट बलर ड्वेन ब्राभो र कर्ण शर्माको १/१ ओभर बाँकी रहंदा धोनीले जडेजालाई बल थमाए।
खेलपछि पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसनमा धोनीलाई जडेजालाई अन्तिम ओभर दिनुको कारण सोधिएको थियो। धोनीले बताए –
“ब्राभो फिट थिएनन्। उनि मैदानबाट बाहिरिएपछि फिर्ता आएनन्। त्यसैले अन्तिम ओभरमा जडेजालाई बलिंग लगाउनु पर्यो। कर्ण र जडेजा मध्ये १ जना रोज्नै पर्थ्यो त्यसैले मैले जडेजा रोजे।”
ब्राभोले खेलमा ३ ओभर बलिंग गर्दा मात्र २३ रन खर्चेर श्रेयस ऐयरको विकेट लिएका थिए। तर त्यसपछि उनि मैदान बाहिरिएका थिए जसपछि फिर्ता आएनन् जुन चेन्नाईको हारको प्रमुख कारण पनि बन्न पुग्यो।
अक्षर पटेलले जडेजाको अन्तिम ओभरमा ३ छक्का हिर्काएर जितसम्म पुर्याएका थिए
धोनीले धवनको विकेट महत्वपूर्ण रहेको तर क्याच छुट्दा मौका गुमाएको बताए – “शिखरको विकेट महत्वपूर्ण थियो , हामीले उनको क्याच केहि पटक छुटाउन पुग्यौं। उनि त्यसको ब्याट्सम्यान हुन् जो स्कोरबोर्ड चलाइराख्ने गर्छन्। उनि क्रिजमा हुँदा स्ट्राइक रेट राम्रो सन्तुलन गर्छन्। मलाई लाग्छ उनको विकेट निर्णायक थियो।”
धवनको सातौँ ओभरमा दिपक चाहरले, दशौँ ओभरमा धोनीले तथा १६ औं ओभरमा अम्बाती रायडुले क्याच छुटाएका थिए जसको उनले भरपुर फाइदा उठाए।
धोनीका अनुसार पहिलो इनिंगमा भन्दा दोश्रो इनिंगमा ब्याटिंग गर्न पिच सहज थियो – “पहिलो र दोश्रो इनिंगमा तुलना गर्दा दोश्रो इनिंगमा ब्याटिंग थोरै सहज थियो। बल ब्याटमा राम्रो आएको थियो जसले ब्याट्सम्यानलाई बढी सहज बनायो। तर हामीले शिखरलाई श्रेय दिनुपर्छ , उनले निकै राम्रो ब्याटिंग गरे जसलाई अन्य ब्याट्सम्यानहरुले राम्रो साथ दिए।”
“मैदानमा धेरै शित थिएन जसले गर्दा पहिलो भन्दा दोश्रो इनिंगमा सहज बायो। पहिलो इनिंगको मध्यम ओभर भन्दा दोश्रो इनिंगको मध्यम ओभरमा रन बनाउन बढी सहज थियो।”
धोनीले स्याम करनको १९ औं ओभरको तारिफ गरे। उक्त ओभरमा करनले मात्र ४ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए।
“स्यामको अन्तिम ओभरमा राम्रो बलिंग गरे। उनले योर्कर राम्रो गरे जसरि कोचले बलरलाई सिकाउने गर्छन्। मलाई लाग्छ यो खेलले उनलाई धेरै आत्मविश्वास दिएको छ योर्कर फाल्ने मामलामा।”
जितपछि दिल्लीका कप्तान श्रेयस ऐयरले धवनको साथै अक्षर पटेलको तारिफ गरे –
“मलाई लागेको थियो कि यदी शिखरले अन्तिमसम्म ब्याटिंग गर्ने हो भने हामि जित्नेछौँ। तर जसरि अक्षरले बललाई हिर्काए त्यो हेर्दा गजबको थियो। हामीले ड्रेसिंग रुममा जब पनि ‘म्यान अफ द म्याच’ दिने गर्छौं उनि सधै छनौट हुने गर्छन्। उनि अदृश्य हिरो हुन्। उनि सधै राम्रो तयारी गर्छन् भने उनलाई आफु के गर्दैछु राम्रो थाहा हुन्छ।”
आईपीएलमा १६७ औं इनिंग ब्याटिंग गर्दा पहिलो शतक बनाउदै खेलको प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका दिल्ली ओपनर धवनले यो शतक विशेष भएको प्रतिक्रिया दिए –
“१३ वर्ष खेलेपछि, मेरो लागि यो शतक निकै विशेष छ। निकै खुसि छु। प्रतियोगिताको सुरुवातमा म बल राम्रो हिर्काइरहेको थिए तर २०-३० लाई ५० रनमा बदल्न सकीरहेको थिईन। तर एक पटक सुरुवात भएपछि तपाईमा आत्मविश्वास आउछ। म मात्र त्यही लयलाई कायम राख्दै भरपुर फाइदा उठाउन चाहन्थे।”
शिखर धवनले आईपीएल करियरको पहिलो शतक बनाए
“म धेरै सोच्ने गर्दिन र सकरात्मक रहन्छु। म पिच अनुसार योजना बनाउने गर्छु। फिटनेस निकै महत्वपूर्ण छ। भाग्यवश मैले कोरोनाको कारण लामो ब्रेकमा आफ्नो रुटिन अनुसार काम गर्न सके।”
धवन दिल्लीको लागि शतक बनाउने आठौँ ब्याट्सम्यान बनेका छन्। यस अघि डेभिड वार्नर, एबि डी भिल्लीयर्स, बिरेन्द्र सेहवाग, केभिन पिटरसन, क्विन्टन डीकक, सन्जु स्यामसन र रिशभ पन्तले शतक बनाएका थिए।
जित पछि दिल्ली ९ खेलमा ७ जित र २ हार सहित १४ अंक बटुल्दै पुनः अंकतालिकाको शिर्षस्थानमा उक्लेको छ। समान १२ अंक रहेको मुम्बई र बैंगलोर दोश्रो र तेश्रो स्थानमा रहेको छ। हारपछि चेन्नाई छैठौं स्थानमा झरेको छ। ९ खेलमा चेन्नाईको यो छैठौ हार हो। समान ६ अंक रहेता पनि हैदरावाद नेट रन रेटमा अघि रहँदै छैठौं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत चेन्नाईले आगामी खेल राजस्थान बिरुद्ध सोमबार तथा दिल्लीले पन्जाब बिरुद्ध मंगलबार खेल्ने तालिका रहेको छ।